ကာရိုနာဗိုင်းရစ်ပျံ့နေလို့ Major Event (အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပွဲ) တွေ ဆက်တိုက် Cancel လုပ်နေချိန် အပီကဲနေတာက Xiaomi နဲ့ realme။ မော်ဒယ်သစ် မိတ်ဆက်တာ အထူးဆန်း (တကယ်) မဟုတ်တော့သလို စျေးကွက်ရဖို့ တမင်တကာ လုပ်ယူသလို ဖြစ်လာတယ်။
အတိကျ ပြောရရင် Mi 10 နဲ့ Black Shark3စီးရီး မိတ်ဆက်တာ ၂ ပတ်လောက်ပဲ ကွာမယ်၊ X50 5G နဲ့6စီးရီးထွက်တာလည်း ၂ ပတ်ပဲ Gap ခြားတယ်။ ပြောရင် ထင်တိုင်းလုပ်နေတဲ့အကွက်လို စမတ်ဖုန်းတွေ ထုတ်ချင်တိုင်းထုတ်ပြီး လက်ရှိ အနေထားအရ အရမ်းကို သက်သာတဲ့စျေးနဲ့ ရောင်းတယ်။
$200 Poco X2 (Image: 9to5 Google)
မတ်လ ၄ ရက်နေ့မှာ Black Shark3ဂိမ်းမင်းဖုန်းကို Xiaomi မိတ်ဆက်သွားတယ်၊ အနိမ့်ဆုံးမော်ဒယ်ကို ခန့်မှန်းတန်ဖိုး ၇ သိန်း ဝန်းကျင်နဲ့ ဝယ်ရမယ့်အချိန် မသိသလိုဘာလိုနဲ့ realme က တည့်ဖိုက်ပစ်လိုက်တယ်။
Killer လို့ ပြောချင်ပေမယ့် မတန်ဘူး၊ ဒါမယ့် ဒေါ်လာ ၂၀၀ အောက် (မြန်မာငွေ ၃ သိန်း) တန်ဖိုးနဲ့ Performer စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး ပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်။ အဲ့တော့ စျေးသက်သာအောင် တမင်ထုတ်ရောင်းနေတဲ့ realme အရွေ့ကဘာလဲ?
အမြင်အားဖြင့် ပြောရင်တော့ ခုထိဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ ချာနေတုန်းပဲ။ ဒါမယ့် နာမည် ဘလပွဲနဲ့ ထုတ်ထားတဲ့5စီးရီးတွေထက်တော့ ပိုသဘောကျတယ်။ ဟိုမရောက်၊ ဒီမရောက် SoC သုံးပြီး Megapixel Sensor မြင့်လိုက်တာနဲ့ စျေးကွာသွားတာထက်စာရင် ပြောလို့၊ ဆိုလို့ ကောင်းတဲ့ထဲ ပါတယ်။
6 စီးရီးမှာတော့ လိုတာထက် ပိုတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးရတယ် (နောက်တာပါ) အထူးသဖြင့် Pro မော်ဒယ်ကို 90Hz Screen ၊ 720G SoC ပြောင်းသုံးလိုက်တာက ဖြစ်သင့်တယ်လို့ သုံးသပ်မိတယ်။
တစ်ခုပဲ ပြောစရာရှိတာက Under-display Fingerprint Sensor ပါမလာဘူး (မျှော်လင့်မိ) OLED Panel သုံးထားတယ်လို့ မကြေညာသွားတဲ့အတွက် IPS LCD နဲ့ပဲလာမယ်၊ Sensor ကို ပါဝါခလုတ်နဲ့ တွဲထည့်လိုက်တဲ့အတွက် တချို့သောသူတွေ ကျောဘက်က အခွက်ကြီးကို မနှစ်သက်သူတွေ အဆင်ပြေသွားမယ်။
Personal အမြင်ရဆိုရင် ဒီတစ်ခါ ရွှေ့သွားတဲ့အကွက်ကို ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ ကြိုက်တယ်ဆိုတာက ဒီဘက်ခေတ် အနေထားနဲ့ ကိုက်တယ်
Xiaomi ကိုတည့်ဖိုက်တာက စျေးဆိုတော့ မကောင်းဘူးပြောလည်း မျက်စိမှိတ် ဝယ်ကျမှာပါ။
ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဂျင်းထည့်တာ မဟုတ်တဲ့အတွက်6စီးရီးမှာ ဘာထူးခြားသွားလဲ? ဘာမှတော့ မထူးခြားလာပေမယ့် ပြောင်းလဲသွားတာလေးတွေ ရှိပါတယ်။
Punch-hole Notch ပြောင်းသုံးလိုက်တာ ကျန်တဲ့ Brand တွေကိုပါ ဆော်လိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ်။ မော်ဒယ် ၂ မျိုးလုံးမှာ 90Hz Screen ပါလာတာ SoC ခွန်အားနဲ့ ကြည့်ရင် မဖြစ်နိုင်ဘူး၊ သာမန် အသုံးပြုဖို့အတွက်တော့ Smooth Experience ရကောင်းရနိုင်မယ်၊ ဂိမ်းဆော့ဖို့အတွက်တော့ အထောက်ပံ့ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
MediaTek G90T Processor နဲ့ Mali-G76 MC4 GPU နဲ့ Coupling လုပ်ထားတယ်၊ 6.5” Display ကို Full HD+ Resolution နဲ့ ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်5စီးရီးတွေ တာ့တာပြရမယ်။
64MP ISOCELL GW1 Sensor ကို Main အနေနဲ့ သုံးထားပြီး 8MP Ultra-wide ၊ 2MP Macro နဲ့ 2MP B&W Auxiliary Unit (Monochrome ပြောရင်ပြီးရော) ဆိုပြီး ကင်မရာ ၄ လုံးတွဲလာမယ်။ Selfie ကိုတော့ 16MP Sensor နဲ့ အားဖြည့်ထားတယ်။
Pro ဆိုတဲ့အတိုင်း Powerful SoC ၊ 6.6” Display အပြင် ကျောဘက် ကင်မရာပိုင်းမှာ 12MP Tele-lens ပြောင်းသုံးတာကလွဲလို့6နဲ့ အတူတူပဲ (B&W မပါတော့ဘူး)
ဒါပေမယ့် Punch-hole Notch မှာ 16MP Sony IMX471 နဲ့ 8MP Ultra-wide နဲ့လာမယ်၊ Back Camera နဲ့ UIS/UIS Max ဗီဒီယို Stabilization Support ရလာမယ်။
မော်ဒယ် ၂ မျိုးလုံးမှာ 4,300 mAh Battery သုံးထားမှာဖြစ်ပြီး VOOC 4.0 30W Fast Charging စနစ်ထောက်ပံ့ထားမယ်။
Realme6ကို ဒေါ်လာ ၁၇၇ နဲ့ ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီး 4GB RAM/ 64GB Storage နဲ့ ရမယ်၊ 8GB RAM/ 128GB Storage အလုံးဆိုရင်တော့ ဒေါ်လာ ၂၁၈ လောက် ပေးရမယ်။
6 Pro ကတော့ ဒေါ်လာ ၂၃၂ နဲ့ စရောင်းမှာဖြစ်ပြီး 8GB RAM/ 256GB Storage မော်ဒယ်ဆိုရင်တော့ အများဆုံး ဒေါ်လာ ၂၆၀ ကျသင့်မှာပါ။
အခုလို စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ ရောင်းချလိုက်တာ အဖြေရှင်းပါတယ်၊ ကျွမ်းကျင်သူတွေ သုံးသပ်ချက်အရဆိုရင် Poco X2 ကို တည့်ဆော်တယ်၊ အိန္ဒိယစျေးကွက်မှာ ပိုင်ဆိုင်မှု ၂၂၅% ပိုများလာတာနဲ့အညီ အနိမ့်ဆုံးစျေးနဲ့ realme6စီးရီးတွေ ထုတ်ရောင်းတယ်။
ဒါဆိုရင် ဒေါ်လာ ၂၀၀ အောက် ခေါင်းစဥ်အောက်မှာ ဘယ်ဖုန်းရွေးမလဲ? ကျွန်တော်နဲ့ အမြင်တူမလား ပွားကြည့်တာပေါ့။